कसरी एक फिजेट स्पिनर बनाउन नि: शुल्क हार्डवेयर
केही हप्ता अघि, तीन-पोइन्ट ताराको आकारमा जिज्ञासु ग्याजेटहरू हाम्रो जीवनमा देखा पर्‍यो जुन तिनीहरू आफैंमा मात्र घुमाउँदछन्, मानौं तिनीहरू माथि स्पिन गर्दै थिए तर फरक आकारको साथ। बच्चाहरू होईन तर केटाकेटीहरू यस ग्याजेट द्वारा चकित भएका छन् जुन भनिन्छ फिडट स्पिनर। यी फिडट स्पिनरहरू स्कूल बच्चाहरूको लागि बर्षको लहर हो तर तिनीहरू धेरै वयस्कहरूको लागि एक मूर्ख खेलौना पनि हुन्।
हालका दिनहरूमा यो फेसनले हजारौं यूरो उत्पादन गरिरहेको छ, तर धेरैले भन्छन कि यो "फेसन" त्यस्तो होइन किनकि फिडट स्पिनर ग्याजेट पहिले नै वर्षौंदेखि अवस्थित छ, तर फिडट स्पिनर वास्तवमा के हो? फिडट स्पिनरको कुन मोडलहरू छन्? के हामी आफैंले यस्तै ग्याजेट बनाउन सक्दछौं?
1 फिडट स्पिनरहरू के हुन्?
2 फिडट स्पिनरका कुन मोडलहरू छन्?
3 म कसरी फेड स्पिनर पाउन सक्छु?
4 म कसरी घर बनाउँक फिजेट स्पिनर बनाउन सक्छु?
फिडट स्पिनरहरू के हुन्?
एक फिडट स्पिनर वा केवल एक स्पिनर हो तनावबाट छुटकारा दिने खेलौना जुन केन्द्रीय शाफ्टले बनेको हुन्छ जसमा एक वा बढी बेयरि contains हुन्छ र त्यो दुई वा तीन हातहरू मध्य अक्षबाट बाहिर आउँदछ जुन प्रत्येक बेयरिंगको साथ समाप्त हुन्छ। यी फिडट स्पिनरहरूको सामग्री धेरै फरक हुन सक्छ यद्यपि सबै भन्दा साधारण प्लास्टिक वा यस्तै सामग्रीहरूको बनेका स्पिनरहरू भेट्टाउनु हो।
यो तनाव कम गर्ने खेलौना १ 1993 XNUMX in मा एक केमिकल ईन्जिनियरको परिणामको रूपमा जन्म भएको थियो जसले आफ्नी छोरीसँग कुराकानी गर्नमा समस्या आएको थियो बिरामीको कारण। यस इञ्जिनियरलाई क्याथरीन हेटिंगर भनिन्छ। र हामी मध्ये धेरैले सोच्न सक्छौं कि ऊ वर्तमानमा संसारकै धनी मानिसहरु मध्ये एक हो, यद्यपि तथ्य यो हो कि ऊ त्यस्तो होइन किनभने पेटेन्टले उनलाई वर्षौं पहिले हरायो। यस पछि, धेरै चिकित्सा संस्थाहरूले यस "हात कताई शीर्ष" एक उपकरणको रूपमा प्रयोग गरे बच्चाहरू र / वा अटिज्म, ध्यान घाटा, तनाव, चिन्ता वा उदासीनता भएका व्यक्तिहरूसँग काम गर्दै.
फिडट स्पिनरका कुन मोडलहरू छन्?
हाल फिडेट स्पिनरका धेरै मोडेलहरू छन्, किनकि फेसनको साथसाथै यो कलेक्टरको वस्तु पनि हुँदैछ। सामान्यतया, मोडेलको बिच फरक पार्न प्रयोगकर्ताले दुई तत्व लिन्छन्: सामग्रीको प्रकार र असर। सामग्रीको सन्दर्भमा, हामीले भन्नुपर्दछ कि धातु स्पिनरहरूलाई उच्च-अन्त मानिन्छ, राम्रो बीयरिंगहरू र प्रोफाइल गरिएको फिनिश भएपछि। त्यसोभए त्यहाँ प्लास्टिकका स्पिनरहरू हुन्छन्, यी स्पिनरहरू धेरै सामान्य हुन्छन् र खराब बीयरिंगको साथ। यो सामान्य नियम होईन, त्यो हो, त्यहाँ धेरै राम्रो बेयरिingsहरू भएको प्लास्टिकको स्पिनर हुन सक्छ, तर त्यहाँ "खराब" मोडेलहरू पनि छन् जुन खराब फिनिश र खराब बेयरिingsहरू छन् जसले स्पिनरको अनुभवलाई त्यति राम्रो गर्दैन। यो कुरामा जोड दिनुपर्दछ फिडट स्पिनर को सबै भन्दा महत्वपूर्ण हिस्सा असर छ। फिडजेट स्पिनरले पारेको प्रकारमा निर्भर गर्दै, स्पिनर उच्च वा कम गुणस्तरको हुनेछ र त्यसकारण अधिक वा कम मूल्य हुनेछ। खुल्ला ग्याजेट समाचार तपाईंसँग फिडट स्पिनर मोडेलहरूको लागि एक गाईड छ र प्रत्येक लि model्क प्राप्त गर्नका लागि लिंक छ जुन उनीहरूले हामीलाई सूचित गर्दछन्।
म कसरी फेड स्पिनर पाउन सक्छु?
त्यहाँ हालै फिजेट स्पिनर प्राप्त गर्न दुई तरिकाहरू छन्: या त हामी यी स्पिनरहरू मध्ये एक खरीद गर्छौं वा हामी आफैं निर्माण गर्छौं। हामी फ्रि हार्डवेयरमा भएको हुनाले, सामान्य कुरा यो हो कि हामीले यस अन्तिम विकल्पलाई छनौट गर्छौं, जुन हामी विस्तृत रूपमा कुरा गर्नेछौं, तर त्यो भन्दा पहिले हामी खरीद गर्न सकिन्छ कि फिडट स्पिनरमा रोक्नेछौं।
खेलौनाको सफलता यस्तो छ कि फिडट स्पिनरले स्वर्ण जस्ता धेरै स्थानहरूमा व्यवहार गर्दछ। त्यो हो, यसको यसको मूल्य छ जुन स्टकमा निर्भर रहन्छ, यसलाई बेच्ने ठाउँहरूको संख्या, आदि ...3यूरोको सामान्य मूल्य तर दिन वा घण्टा सम्ममा १० यूरोको अंकमा पुग्छ। तथ्य जुन धेरैको ध्यानाकर्षण गर्न रोक्दैन, केवल फिडट स्पिनरले उत्पादन गर्ने प्रभावहरूको कारणले गर्दा होइन तर मूल्य र यसका कारण बिक्रीमा आएको परिवर्तनको कारण।
अब हामी जहिले पनि हाम्रो फेड स्पिनर बनाउन सक्दछौं। यदि हामी यो विकल्प छनौट गर्दछौं भने विकल्पहरू म साँच्चिकै रुचाउँछु, हामीसँग यो गर्न दुई तरिकाहरू छन्: वा हामी रिसाइक्ड सामग्री प्रयोग गर्दछौं र हामीले फिडेट स्पिनर निर्माण गरेका छौं जुन अरू कसैसँग हुँदैन; ओह हामी व्यक्तिगत फिडट स्पिनर सिर्जना गर्न फ्रि हार्डवेयर छनौट गर्दछौं त्यो सायद अरु कसैसँग होला तर घर निर्माणको तुलनामा यो अझ "औद्योगिक" हुनेछ।
म कसरी घर बनाउँक फिजेट स्पिनर बनाउन सक्छु?
एक फिडट स्पिनर निर्माण गर्न सजिलो काम हो। पहिले हामीले स्पिनरको सामान्य आकार प्राप्त गर्नुपर्नेछ, हामी यो कार्डबोर्ड, काठ, हार्ड प्लास्टिक, आदिमा गर्न सक्दछौं ... कुनै पनि सामग्रीले गर्छ। त्यसो भए हामी बेयरि useहरू प्रयोग गर्दछौं जुन हामी कुनै हार्डवेयर स्टोरमा खरीद गर्न सक्छौं। आवश्यक छ कम्तिमा एउटा असर, यो स्पिनरको मध्य भागमा हुनेछ।
तर हामी स्पिनरको छेउमा पनि बेयरि useहरू प्रयोग गर्न सक्छौं, हो, यदि हामी अन्तमा बेयरि use प्रयोग गर्छौं भने हामीले त्यसलाई सबै टोकाहरूमा प्रयोग गर्नुपर्दछ, यो केवल एक छेउमा प्रयोग गर्न लायक छैन। वाशरहरू प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ जहाँ हामी फिंगट स्पिनर घुमाउँदा हामी औंला आराम गर्ने छौं। तल हामी कसरी घर बनाउने स्पिनर निर्माण गर्ने भिडियो समावेश गर्दछौं, भिडियोमा हामी देख्न सक्छौं कि कसरी एक स्पिनर चरण-दर-चरण निर्माण गरिन्छ।
तर नि: शुल्क हार्डवेयरको साथ निर्माणले राम्रो परिणामहरू प्रदान गर्दछ। सारमा, थ्रीडी प्रिन्टि through मार्फत निर्माणले समान प्रदान गर्दछ तर अधिक पेशेवर समाप्तिका साथ, यो छैन जब एक खरीद स्पिनर को माध्यम बाट जान सक्षम।
थ्रीडी प्रिन्टि through मार्फत स्पिनरको निर्माणको लागि हामीलाई दुईवटा चीज चाहिन्छ: PLA वा ABS र बीयरिंगको साथ एक थ्रीडी प्रिन्टर। यदि हामीसँग यी दुई चीजहरू छन् भने हामी केवल एक वस्तु रिपोजिटरीमा जान्छौं र हामीले चाहेको स्पिनर मोडेल डाउनलोड गर्नुपर्दछ (यदि हामी अटोक्याडसँग धेरै कामदार छौं भने हामी यसलाई यो उपकरणसँग सिर्जना गर्न सक्दछौं)।
एक पटक हामीसँग मोडेल छ, हामी यसलाई थ्रीडी प्रिन्टरको साथ प्रिन्ट गर्दछौं र समाप्त भएपछि हामी बेयरि add थप्छौं। यी प्रकारका बीयरि 3Dहरू थ्रीडी प्रिन्टरहरू द्वारा पनि प्रयोग गरिन्छ, त्यसैले यी तत्वहरूको जोडी बनाउन हामी तातो स्रोत जस्तै एक वेल्डर प्रयोग गर्न सक्दछौं। दिदै प्लास्टिकको भागमा थोरै तापले हामीलाई बेरीingsिंगहरू सम्मिलित गर्न सजिलो बनाउँदछ.
को मोडलहरू फिडट स्पिनर इन्टरनेटमा सब भन्दा प्रसिद्ध थ्रीडी वस्तु रिपोजिटरीमा छन्। तिनीहरूमा हामी फिजेट स्पिनरको फाइल फेला पार्न सक्छौं जुन हामीलाई मनपर्दछ, डाउनलोड गर्नुहोस् र प्रिन्ट गर्नुहोस्। तर भण्डारहरू विशेष उल्लेख गर्न योग्यका छन् थिंगिभर्सि y येगी.
यी भण्डारहरू पहिले नै सयौं ई समावेश गर्दछ हजारौं स्पिनर मोडेलहरू जुन हामी डाउनलोड र प्रिन्ट गर्न सक्छौं हाम्रो घरमा। Instructables योसँग स्पिनर मोडेलहरू पनि छन्, तर थोरै हदसम्म। यदि हामी वास्तवमै थ्रीडी प्रिन्टि worldको संसारमा नयाँ छौं भने सम्भवत इन्स्ट्रक्टेबल तपाईको भण्डार हो किनकि प्रिन्ट फाइल समावेश गर्नुको साथसाथै यसले स्पिनर निर्माण गर्नका लागि चरणहरू सहितको गाईड समावेश गर्दछ।
त्यहाँ धेरै मोडेलहरू र "स्पिनर" फारामहरू छन्, तर ती मध्ये धेरै घर वा 3D प्रिन्टरको साथ हामी पुन: उत्पादन गर्न सक्दछौं। मसँग सस्तो विधिहरू छनौट हुन्छ किनकि सबैसँग बाँच्न पैसा हुँदैन, तर यस अवस्थामा मलाई लाग्छ फिडट स्पिनरको निर्माणको लागि उत्तम विकल्प थ्रीडी प्रिन्टरको प्रयोग हो र Thingiverse जस्तै केहि रिपोजिटरीबाट फाइल।
परिणाम एक सक्कली, पेशेवर फिनिशको साथ सस्तो स्पिनर हो। यो सत्य हो कि सबैको हातमा थ्रीडी प्रिन्टर हुँदैन, तर तपाईं थ्रीडी प्रिन्टि services सेवाहरूको माध्यमबाट अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ वा पुनर्चक्रित सामग्रीको साथ निर्माणको लागि रोज्नुहोस्, एक कम पेशेवर विकल्प। तपाईंले निर्णय लिनुभयो, तर फिडट स्पिनर निर्माण गर्दा उनीहरूलाई खरीद गर्नुभन्दा बढी रमाईलो छ तिमीलाई लाग्दैन?
लेखको पूर्ण मार्ग: नि: शुल्क हार्डवेयर » 3D मुद्रण » फिडट स्पिनर, एक खेलौना जुन हामी निर्माण गर्न सक्दछौं
यो थ्रीडी प्रिन्टर एक टनसम्म तौलका वस्तुहरू निर्माण गर्न सक्षम छ